Zvose GTA 5 Cheats PS4 wave uchitsvaga ari pano. Farira runyora rweGTA 5 Cheats PS4 uye ona zvose zvimwe zvinhu zvinonakidza zvaungaita.
Pedzisa basa rimwe nerimwe nemitambo inobhururuka uye zvinokonzera kukanganisa nezvimwe zvakavanzika zvakanakisisa zvemutambo. Unravel yakavanzika yekugadzirisa zvigadziridzo uye inobvisa motokari dzese dzakanaka dzinowanika.
Iwe unogonawo kudzora iyo GTA 5 nyika inoshandisa idzi cheats. Pakupedzisira, kuve kusingafi uye kusakundikana nehutano hwakakura uye zvombo.
Nzira Yokushandisa GTA 5 Cheats PS4
Kutanga, shandisa D-pad kuti uise mazano ekutungamirira (kuruboshwe, kurudyi, etc.).
Zvadaro, chengetedza zvinyorwa nokukurumidza asi zvakajeka sezvinobvira. Chigutsiro chinowanikwa kumusoro kwemepu mushure mokunge makapinda nhamba dzenhema.
Pakupedzisira, fara mutambo nesimba rose raunazvo.
Kushandisa cheats hakubatsiri iwe kubva pakuwana kubudirira uye zvipfeko asi chete nokuda kwekutumwa ikoko kana kuti kutamba sangano iwe "wakanyengedza." Kungoshandura zvakare mutambo kuti uite kuti kubudirire uye kuputika zvakare.
GTA 5 Cheats PS4 Vatsva Maitiro
Cheat Effect Cheat Codes
Bigfoot (Sasquatch) Mode Ikopi inoshandiswa nekudya miti inokosha yePeote
Doro Mode Triangle, Kurudyi, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Pakati, Chikwata, Kuruboshwe
Kuputika Ammo Rounds Kurudyi, Square, X, Kuruboshwe, R1, R2, Kuruboshwe, Kurudyi, Kurudyi, L1, L1, L1
Kushungurudza Melee Kurwisa Kurudyi, Kuruboshwe, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2
Kurumidza Kurumidza Triangle, Kuruboshwe, Kurudyi, Kurudyi, L2, L1, Square
Kurumidza kushambira Kuruboshwe, Kuruboshwe, L1, Kurudyi, Kurudyi, R2, Kuruboshwe, L2, Kurudyi
Flaming Bullets L1, R1, Square, R1, Kuruboshwe, R2, R1, Kuruboshwe, Chikamu, Kurudyi, L1, L1
Kubvumirwa Kurudyi, X, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, R1, Kurudyi, Kuruboshwe, X, Triangle
Nhamba Yakaderera Inoda R1, R1, Circle, R2, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe
Max Hutano & Mauto Denderedzwa, L1, Triangle, R2, X, Girafu, Denderedzwa, Kurudyi, Chikamu, L1, L1, L1
Kurera Anoda Nhamba R1, R1, Circle, R2, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi
Recharge Ability X, X, Square, R1, L1, X, Kurudyi, Kuruboshwe, X
Skyfall L1, L2, R1, R2, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, L1, L2, R1, R2, Kuruboshwe, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi
Kupera Zvishoma Kunoda Chikwangwani, L2, R1, Triangle, Kuruboshwe, Chikamu, L2, Kurudyi, X
Super Jump Kuruboshwe, Kuruboshwe, Triangle, Triangle, Kurudyi, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mheto, R1, R2
GTA 5 Cheats PS4 Weapon uye Parachute
Zvose Zvombo uye Ammo Triangle, R2, Kuruboshwe, L1, X, Kurudyi, Triangle, Pasi, Girafu, L1, L1, L1
Parachute Kuruboshwe, Kurudyi, L1, L2, R1, R2, R2, Kuruboshwe, Kuruboshwe, Kurudyi, L1
GTA 5 Cheats PS4 Spawn Vehicles
BMX Kuruboshwe, Kuruboshwe, Kurudyi, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, Pakati, Chikwata, Triangle, R1, R2
Buzzard Denderedzwa, Denderedzwa, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
Caddy Denderedzwa, L1, Kuruboshwe, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X
kometi R1, Circle, R2, Kurudyi, L1, L2, X, X, Square, R1
Duster Kurudyi, Kuruboshwe, R1, R1, R1, Kuruboshwe, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1
Limo R2, Kurudyi, L2, Kuruboshwe, Kuruboshwe, R1, L1, Circle, Right
PCJ-600 R1, Kurudyi, Kuruboshwe, Kurudyi, R2, Kuruboshwe, Kurudyi, Square Yakarurama, L2, L1, L1
Rapid GT R2, L1, Circle, Kurudyi, L1, R1, Kurudyi, Kuruboshwe, Mutsara, R2
Sanchez Denderedzwa, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1
Stunt Plane Denderedzwa, Kurudyi, L1, L2, Kuruboshwe, R1, L1, L1, Kuruboshwe, Kuruboshwe, X, Triangle
Trashmaster Denderedzwa, R1, Circle, R1, Kuruboshwe, Kuruboshwe, R1, L1, Circle, Right
GTA 5 Cheats PS4 World Control
Mutungamiri Mode Button combo inouya, inokonzera iko kushandisa serofu ikozvino
Mwedzi Girafu Kuruboshwe, Kuruboshwe, L1, R1, L1, Kurudyi, Kuruboshwe, L1, Kuruboshwe
Cars Slippery Triangle, R1, R1, Kuruboshwe, R1, L1, R2, L1
Slow Motion Triangle, Kuruboshwe, Kurudyi, Kurudyi, Chikwereti, R2, R1
Zvinosuruvarisa, hapana GTA 5 Cheats PS4 yekuita mari iye zvino, Asi iwe unogona kutarisa mamwe emitambo yedu yemitambo, yakadai nzira yekuita mari yakawanda muGTA 5 uye mamwe mazano pano.
Grand Theft Auto 6: Kuburitswa zuva, mapuratifomu, uye zvese zvaunoda kuti uzive nezveGTA 6